ASTHMA V2.1 (WPAI: Asthma)
Imibuzo elandelayo ibuza ngomphumela wesifuba somoya osinaso mayelana nokusebenza ngempumelelo kanye nokwenza imisebenzi ejwayelekile. Sicela ukuthi ugcwalise izikhala ezishiyiwe noma ufake indingilizi enombolweni, njengoba kukhonjisiwe.
Ngabe uyasebenza njengamanje (usebenzela iholo)? _____ CHA ___ YEBO
Uma impendulo yakho ingu-CHA, faka uphawu ku-“CHA” bese wedlulela embuzweni wesi-6.
Imibuzo elandelayo imayelana nezinsuku eziyisikhombisa ezedlule, ayilufaki usuku lwanamuhla.
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, ulahlekelwe ngamahora amangaki emsebenzini ngenxa yezinkinga ezihambisana nesifuba somoya osinaso? Faka namahora alahleke ngezinsuku obugula ngazo, nezikhathi ofike ngazo emsebenzini ngemuva kwesikhathi, nezikhathi ohambe ngazo emsebenzini ngaphambi kwesikhathi, njalonjalo, ngenxa yesifuba somoya osinaso. Ungasifaki isikhathi esilahleke ngokuhlanganyela kwakho kulolu cwaningo.
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, ulahlekelwe ngamahora amangaki okusebenza ngenxa yanoma yisiphi esinye isizathu, njengokuthatha isikhathi sokuphumula, amaholide okuphumula, nesikhathi osithathe uhlanganyela kulolu cwaningo?
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, mangaki amahora owasebenze ngempela?
AMAHORA angu-_____ (Uma impendulo ingu- “0”, yedlulela embuzweni wesi-6.)
5. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, ngabe isifuba somoya osinaso sibe
nomthelela kangakanani ekusebenzeni kwakho ngempumelelo ngenkathi usebenza?
Cabanga ngezinsuku lapho ube ungivimbele ngokuphelele emisebenzini yakho nokukhinyabezeka enanini lomsebenzi noma ohlotsheni lomsebenzi obungawenza, nangezinsuku ofeze ngazo umsebenzi ongaphansi kwalowo obufisa ukuwenza, noma ngezinsuku ongakwazanga ukwenza ngazo umsebenzi ngokucophelela okujwayelekile. Uma isifuba somoya sibe nomthelela omncane kakhulu emsebenzini wakho, khetha inombolo ephansi. Khetha inombolo ephezulu uma isifuba somoya sibe nomthelela omkhulu kakhulu emsebenzini wakho.
Bhekisa kuphela ekuthini isifuba somoya sibe nomthelela kangakanani ekusebenzeni kwakho ngempumelelo ngenkathi usebenza.
Isifuba somoya singivimbele
FAKA INDINGILIZI ENOMBOLWENI OYIKHETHAYO
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, isifuba somoya osinaso sibe nomthelela kangakanani ekwenzeni kwakho imisebenzi ejwayelekile yansuku zonke, kungafakwa ukusebenza kwakho emsebenzini owuholelwayo?
Ngemisebenzi ejwayelekile siqonde imisebenzi ovame ukuyenza, njengokusebenza endlini, ukuyothenga ezitolo, ukunakekela izingane, ukuzivocavoca, ukutadisha, njalonjalo. Cabanga ngezikhathi lapho ube nokukhinyabezeka enanini lomsebenzi noma ohlotsheni lomsebenzi obungawenza nangezikhathi ofeze ngazo umsebenzi ongaphansi kwalowo obufisa ukuwenza. Uma isifuba somoya sibe nomthelela omncane kakhulu emisebenzini yakho, khetha inombolo ephansi. Khetha inombolo ephezulu uma isifuba somoya sibe nomthelela omkhulu kakhulu emisebenzini yakho.
Bhekisa kuphela ekuthini isifuba somoya sibe nomthelela kangakanani ekwenzeni kwakho imisebenzi ejwayelekile yansuku zonke, kungafakwa ukusebenza kwakho emsebenzini owuholelwayo.
Isifuba somoya asibanga nomthelela emisebenzini yami ejwayelekile yansuku zonke
Isifuba somoya singivimbele ngokuphelele ukwenza imisebenzi yami ejwayelekile yansuku zonke
WPAI:Asthma V2.1 (Zulu)